Shan Su’aalood oo Dhallinyaradu Weydiistaan ​​Ballanta Dhakhtarka Haweenka ee ugu horreeya
A imtixaan dumar fiican waa baaritaan dhameystiran oo lagu qiimeeyo caafimaadka ilmahaaga Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Tani waa booqasho muhiim ah maadaama ay ka caawinayso inay fahmaan muhiimadda safarada joogtada ah ee dhakhtarka dumarka. Dhakhaatiirteenu way kajawaabi karaan wixii su'aalo ah ee ay ka qabaan baaritaanka ama caafimaadkooda inta lagu jiro ballanta koowaad ee haweenka. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan kugula talineynaa in dumarka da 'dhexdooda ah ay nagu soo booqdaan booqashadaan muhiimka ah ee kahortaga ah. Waalid ahaan, waxaa muhiim ah in laga wada hadlo guudmar guud oo ku saabsan waxa dhallintaada yar yar ay filan karaan kahor booqashadooda. Tani waxay ka caawineysaa iyaga inay dareemaan raaxo badan iyo inay si wanaagsan u diyaariyaan wixii su'aalo ah ee ay qabaan shaqaalahayaga markay na soo booqanayaan.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro booqashada ugu horreysa ee dhakhtarka dumarka?
Markaad jadwal u sameyso imtixaan haween ah oo ka socota Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, dhakhaatiirteennu waxay qaadaan tallaabooyin kala duwan oo muhiim u ah baaritaankaaga, oo ay ku jiraan:
Baaritaanka naasaha: Baadhitaanka naasuhu wuxuu eegaa unugyo aan caadi ahayn, dheecaanno, ama buruqyo.
Imtixaanka miskaha: Tani waxay ogaan kartaa wixii cillado ah ee ku dhaca faruuryaha cambarka, siilka, siilka, makaanka afkiisa, makaanka, ama ugxan sidaha.
Xakamaynta dhalmada: Dhallinta xiiseyneysa xakameynta dhalmada, waxaan u soo bandhigi karnaa talo soo jeedin ku saabsan fursadaha ugu wanaagsan ee caafimaadkooda galmada. Bukaanno badan ayaa dooran kara inay u qaataan si ay uga caawiyaan finankooda.
Imtixaanka STD: Haddii dhallinta yar ay firfircoon yihiin galmada, waxaan iska baari karnaa soo-gaadhista STD.
Tallaalada: Dhakhaatiirteenu waxay ka wada hadli karaan talaalada la heli karo, oo ay ku jiraan talaalka HPV. HPV waxaa lagu cadeeyay inuu sababi karo kansarka xubinta taranka dumarka.
Waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay dhisida xiriir adag oo lala yeesho dhakhtarka dumarka. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad ka hadasho wixii walaac ah ee aad qabtid ama calaamadaha aad la kulmi karto oo aan caadi ahayn. Waxyaabahan waxaa ka mid noqon kara dhibcaha muddada u dhexeysa caadada, galmada oo xanuun badan, ama dheecaan aan caadi ahayn. Markaad daacadnimadaada badato, daryeelka fiican ayaad kaheleysaa kooxdayada.
Ma u baahanahay in lay baaro?
Mararka qaarkood, waxaan kugula talineynaa baaritaano marka bukaanku leeyahay astaamo aan caadi ahayn. Kuwa galmada ugu firfircoon lamaanayaasha badan, waxaan kugula talin karnaa baaritaanka STD. Markaad gaarto 21, waxaad bilaabi doontaa baaritaanka PAP, oo laga baaro kansarka. Mammogram-ku wuxuu bilaabmaa qiyaastii 40 ama wixii ka horreeya iyadoo kuxiran taariikhda qoyskaaga iyo arrimo kasta oo suurtagal ah oo khatar kugu ah oo kaa dhigaya inaad u nuglaato inaad ku dhacdo kansarka naasaha.
Su'aalaha aad weydiinayso dhakhtarka dumarka markay booqashada ugu horeyso
Qaar ka mid ah su'aalaha ay dhalinyaradu rabaan inay weydiiyaan dhakhtarkooda haweenka marka ugu horreysa ee ay si fiican u booqdaan dumarka waxaa ka mid ah:
Goorma ayaa mudada loo arkaa mid aan caadi ahayn?
Calaamadaha caadada ma yihiin kuwa caadi ah?
Ma heli karaa tallaalka HPV?
Waa maxay noocyada ka hortagga uurka ee jira?
Sideen ku sameeyaa baaritaanka naasaha nafsaddiisa?
Kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha si aad u weydiiso dhakhtarkaaga dumarka baaritaankaaga dumarka ah ee ugu horreeya.
Mudnaan siinta caafimaadkaaga galmada inta lagu jiro imtixaanka sanadlaha ah ee dumarka si fiican loo qaado
Markaad raadineyso dhakhtarka dumarka ee aniga agtayda, Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa ku caawin kara. Waxaan xafiisyo ku leenahay Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH oo bixiya ballamahan ugu horreeya ee dhakhtarka dumarka. Waxaan ku hagnaa bukaankeena bukaanka ah safarkooda caafimaad waxaana uga jawaabnaa wixii su'aalo ah ee ay ka qabaan caafimaadkooda. Waxaan fahansanahay inay ku dhib noqon karto booqashooyinkan, laakiin waxay muhiim u yihiin caafimaadkaaga guud iyo mustaqbalka galmada. Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan kuu yeelno sida ugu macquulsan. Si loo qorsheeyo booqashadaada ugu horreysa ee dhakhtarka dumarka, call xafiiskayaga maanta.
Goobta Westerville Goobta Dublin Goobta Columbus Daryeelka Dumarka Fiican